यस कारण यि युवती इन्टरनेटमा ‘भाइरल’ ! | Screennepal
यस कारण यि युवती इन्टरनेटमा ‘भाइरल’ !
२०७४, २० आश्विन शुक्रबारscreennepalfeature, Movie0
एजेन्सी २० असोज । यतिखेर एक क्यानेडियन एक युबती इन्टरनेटमा चर्चामा छिन् । क्लेरी नामकी युवतीको फोटो इन्टरनेटमा निकै भाइरल भइरहेको छ । यो फोटो भाइरल हुनुको कारण यी युवतीको सुन्दरता होइन। कारण अर्कै छ । वास्तवमा यी युवतीको फोटो भाइरल हुनुको कारण यिनको उमेर हो ।
क्लेरीले जब फेसबुक पेजमा आफ्नो उमेर बताइन् यसले उनका फलोअरहरु निकै चकित परे । क्लेरीको जन्म २२ जनवरी १९९८ मा भएको थियो । उनको उमेर अहिले १९ वर्षको मात्र छ । तर उनको शरीरको फिटनेस हेर्दा उनको उमेरको अनुमान गर्न निकै कठिन छ । क्लेरी आफ्नो उमेरभन्दा कैयौं ठूली देखिन्छिन् ।
क्लेरी १५ वर्षको उमेरदेखि मोडलिङ र विज्ञापन सुटिङ गरिरहेकी छिन् । जब पहिलोपटक मानिसहरुले उनको उमेर थाहा पाए उनीहरुलाई यो कुरामा विश्वास लागेन । तर, पछि क्लेरीले नै सबैको सामु यो सत्य सार्वजनिक गरिन् । क्लेरीले आफ्नो इन्स्टाग्राम र युटुब च्यानलबाट फिटनेस टिप्स दिन्छिन् । सोसल मिडियामा उनका ३ लाखभन्दा बढी फलोअर छन् ।
Previous Postहार्दिक श्रद्धाञ्जली | रहिनन् काजल Next Postब्युटिफुल प्रियंकाको विन्दास चाला...!